Module famandrihana avo lenta IP65
Ny maodelim-pahefana fiarovana IP65 avo lenta dia mandray ny teknolojia famatsiana herinaratra farany sy ny haitao fanaparitahana hafanana, ary natao manokana ho an'ny fiara mitam-piadiana mahery vaika any ivelany. Ny haavon'ny fiarovana ny tontolo iainana dia mahatratra ny IP65, izay afaka mifanaraka amin'ny tontolo masiaka isan-karazany toy ny vovoka, zavona ary fanondranana.
UBC 75010 bidirectional V2G mampiangona antontam-bato be mpampiasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny angovo eo amin'ny fiara mpandeha elektrika sy ny tariby mandeha amin'ny herinaratra .Ny sandan'ny fampiharana dia mitoetra amin'ny fanomezana fahafaham-po ny famandrihana isan'andro ny fiara mpandeha elektrika, ary milalao ny anjara toeran'ny fitaovam-pitaterana angovo bateria fiara elektrika, mahatsapa famandrihana milamina ny tariby herinaratra, fitantanana ny lafiny fitakiana herinaratra, sanda mitambatra amin'ny tamba-jotra micro sy Internet angovo.
UR100040-SW EV fiampangana modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
UR100030-SW EV mamaly modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
UR100020-SW EV fiampangana modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
Ny modely fanaraha-maso ny antontan-tarika umev04 dia miaraka amin'ny efijery miloko LCD ary manana interface manokana ifandraisana amin'ny solosaina amin'ny olombelona. Izy io dia natao manokana ho an'ny fenitra eropeana sy ny fenitra japoney manefa antontam-piara elektrika. Manohana ny CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, sns.
NAHOANA NO MAFIDY
Mino izahay fa ny famoronana no hany fitaovam-piadiana mahery vaika hahazoana vokatra tsara.
Ary hampiasa famoronana isika mandritra ny asa famolavolana vokatra rehetra.
Ekipa R&D matihanina
Nanolo-tena ho mpamatsy tsara indrindra ny singa fototra ho an'ny toby fiampangana faran'izay mafy.
Efa ho 20 taona niainana ny fampandrosoana
Ny fanangonana ny teknolojia herinaratra DC tao anatin'ny roapolo taona lasa dia nametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana ankehitriny.
Famolavolana fanavaozana mandroso
Izahay dia maharitra amin'ny famolavolana vaovao ary manandrana mamolavola andian-dahatsoratra mavesatra ho an'ny toby fiampangana faran'izay mahery.
Fiantohana serivisy kalitao
Izahay dia tsy manome serivisy alohan'ny varotra mialoha ihany, fa koa kalitao avo lenta amin'ny serivisy aorian'ny fivarotana.
● IP65 ambony fiarovana ...
● Transf zaridaina ...
Fahombiazana avo lenta: ny ...
● Fahombiazana avo lenta: t ...
Item UMEV04 DC Ao ...
Mifantoha amin'ny fanavaozana ny herinaratra elektronika, hamaha ny teboka bottleneck olana.
Shenzhen UUGreenPower Electric Co., Ltd, natsangana tamin'ny 2015, dia manolo-tena ho mpamatsy tsara indrindra ny singa fototra ho an'ireo toby fiampangana faran'izay mahery. Ny ekipa dia manana ekipa R & D elektronika matihanina, efa ho 20 taona ny fanangonana teknolojia DC, amin'ny alàlan'ny famolavolana endrika vaovao, mba hamoronana andian-tsarimihetsika 40kW, 30KW, 20KW, 15KW super charge ho an'ny tobim-piantsonana faran'izay mahery.
Ny Shenzhen UUGreenPower dia mifikitra amin'ny fomba fijery mifototra amin'ny mpanjifa, matihanina, mifantoka amin'ny fanavaozana ny teknolojia elektronika herinaratra, ny famahana ny teboka tavoahangy an'ny mpanjifa, ny fitomboan'ny mpanjifa ary ny fampiroboroboana ny angovo maitso sy ny toekarena ambany-karbaona amin'ny indostrian'ny fiara elektrika.
UUGreenPower dia mamoaka vahaolana efatra famahanana mavesatra
UUGreenPower dia namoaka vahaolana efatra fanonerana! Torohevitra lehibe: ny 26 Aogositra, natao tao Shanghai New International Expo Center ny fampirantiana indostrialy fampirantiana faha-14 an'ny Shanghai International. Amin'ity fampirantiana ity, orinasa marobe misy kintana anatiny sy vahiny ...
Charging Alliance: 4173 vaovao ny pilotra ampaham-bolam-panjakana nampiana tamin'ny Mey, tafakatra 59,5% isan-taona
Tamin'ny 11 Jona, ny angon-drakitra navoakan'ny China Charging Union dia naneho tamin'ny fomba ofisialy fa hatramin'ny Mey 2018, ireo vondrona mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa dia nitatitra 266 231 ny antontan-taratasim-bahoaka, ary tamin'ny alàlan'ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa dia nampiana santionany tamin'ny 441.422 ireo antontam-piara. angon-drakitra momba ny angona. A t ...
NDANEV: Famakafakana ireo angon-drakitra fidirana an-tsokosoko an'ireo fiara mifono angovo vaovao manerana ny firenena
Tamin'ny 30 Jona 2018, ny tranonkala ofisialin'ny National Big Data Alliance (NDANEV) an'ny New Energy Vehicles dia namoaka antontan'isa sy fandalinana ny vaovao momba ny fahazoana miditra loharanom-baovao vaovao tamin'ny Mey. Miorina amin'ny angon-drakitra fampahalalana, ity taratasy ity dia mamakafaka sistematika ny laharam-pahamehana fidirana ...
Ny fizarazarana ny Volkswagen Group dia namolavola sy namoaka tobin-tsolika finday ho an'ny fiara elektrika, scooter elektrika ary bisikileta mandeha amin'ny herinaratra, antsoina hoe toby famahanana finday Volkswagenpassat. Ho fankalazana ny faha-80 taonany, Volkswagen dia hametraka tobin-tsolika finday miisa 12 ao Wo ...
Tamin'ny 9 Jolay, namoaka ny «Fampandrenesana momba ny fanitsiana ny fenitra fiampangana amin'ny famahana sy ny fanoloana ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra madio» ny birao misahana ny vidin'ny tanàna Nanjing. Ny fanambarana dia nanambara mazava tsara fa ny fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny herinaratra (12m) novaina ary manolo ny fenitra fihenam-bidy avo indrindra amin'ny se ...